Momba ny AKDN - Première Agence de Microfinance à Madagascar
Ny « Réseau Aga Khan de développement » (AKDN) dia mampivondrona masoivoho samihafa: masoivoho momba ny fampandrosoana, sampan-draharaha, sy fandaharan’asa izay miasa indrindra any amin’ny faritra mahantra indrindra any Azia sy Afrika. Ny mampiavaka ny fomba fiasan’ny AKDN amin’ny lafin’ny fampandrosoana dia ny famoronana sy fampiharana ny paikady, izay andraisan’ireo sampan-draharaha samihafa anjara amin’ny toe-javatra manokana iainany ho fanampiana ireo olona hizaka tena sy ho fanatsarana ny kalitaon’ny fiainana.
Ny tanjona ankapobeny ny tambazotra Aga Khan ho an’ny fampandrosoana dia ny hanatsarana ny kalitaon’ny fiainan’ireo mponina eo amin’ny faritra izay iasan’ireo mpikambana. Ny vina sy ny paikady ny AKDN dia mahasahana ny fanatsarana ny fenitra ara-materialy ny fiainana, ny fahasalamana ary ny fanabeazana. Anisany koa ny fitambaran’ny soatoavina sy fitsipika ilaina amin’ny fandrindrana ny fiaraha-monina: fahasamihafan’ny olona sy ny fanajàna ny kolontsaina samihafa, ny toeran’ny lahy sy ny vavy, ny fitoviana ara-tsosialy, ny fandaminana ny fiarahamonim-pirenena sy ny fahaiza-mitantana.
MAHALIANA AHY NY AKDN